कमर परिधि कसरी मापन गर्न, र परिणाम सही मूल्याङ्कन गर्न?
पातलो बारुला कमर - धेरै महिलाहरु को लागि एक सपना। र यो कि पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण छ, बस एक सौंदर्य घटक छैन। यो बाहिर जान्छ कि कमर परिधि - यो लुगा को मात्र होइन विकल्प जान्नु आवश्यक छ कि एक महत्वपूर्ण सूचक हो। यो पनि महिला र पुरुष दुवै को स्वास्थ्य बताउन सकिन्छ कि महत्त्वपूर्ण मार्कर छ। त्यसैले यदि लेख पढ्न र यसलाई प्रदर्शन खराब छ कि देखा माप को, यो आफ्नो स्वास्थ्य, व्यायाम विचार र आफ्नो आहार समीक्षा गर्न एक अवसर हो पछि।
कमर परिधि कसरी मापन गर्ने?
आवश्यक माप बनाउन गाह्रो छैन। यो कहाँ तिनीहरूले सी वा खेल खेल्न लगभग हरेक घर, मा छ जो एक साधारण टेप उपाय, आवश्यक छ। टेप रूपमा नरम हुनेछ यदि यो राम्रो छ।
कमर परिधि को नजिककालागि बिन्दुमा मापन गर्नुपर्छ। को प्रकार आधारमा आंकडा छ ठाँउ आफ्नो छाती (उच्च कमर) रूपमा नजिक र जांघों को स्तर (कम कमर) नजिक हुन सक्छ। प्रायजसो मा, मुर्कुट्टा को नजिककालागि भाग नाइटो मा स्थित। को कमर भन्दा convex concave, उदाहरण, गर्भवती महिला वा वजन लागि हो भने, सही परिणाम मापन गर्ने नाइटो माथि सेन्टिमिटर को एक जोडी मा गरेको छ भने प्राप्त गर्न सकिन्छ।
मापन लागि सही स्थिति - सीधा खडा (प्राथमिकताको को दर्पण नजिक), र आफ्नो हात तल राखे। को कमर परिधि मापन बसिरहेका सिफारिस गरिएको छैन। आफ्नो शरीर फाटो र पेट खींच, आफूलाई धोका कुनै आवश्यकता छैन। शरीरको वजन वितरित गर्नुपर्छ। मुद्रा पनि मानिसको विशिष्ट हुनुपर्छ। वस्त्र माथि माप नगर्नुहोस् - मापन परिणाम केहि विकृत हुन सक्छ।
कमर परिधि नाप्ने एक मिनेट भन्दा कम लाग्छ! हामी तल्ला गर्न कमर मीटर समानान्तर वरिपरि र्याप र बिस्तारै श्वास छोड्नुहोस् गर्न आवश्यक छ। यो महत्त्वपूर्ण छ टेप उपाय यो कमर पनि तंग र्याप गर्न आवश्यक छैन, छाला मारा छैन। शून्य संग coincides जो टेप मा मार्क, - यो कमर परिधि छ।
यसलाई दुई पटक एक मापन लिन राम्रो छ, र डाटा मेल खाँदैन भने, एक औसत परिणाम लिन्छ।
नम्बर के मतलब?
कमर परिधि - यस्तो कमर-को हिप सूचकांक वा सूचकांक कमर-उचाइ रूपमा संकेतक को गणना को लागि आधार। Overvalued सूचक मानव स्वास्थ्य एक वृद्धि जोखिम सुझाव। बोसो accumulates भने, यो कमर क्षेत्र को अधिक व्यक्ति संभावना छ, यो आंत बोसो को आन्तरिक अङ्गहरू घेरने छ। यस्तो बोसो - सुनिंनु को कारण र धेरै रोगहरु (मधुमेह, कोरोनरी मुटुको रोग र हृदय प्रणाली, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर अन्य रोगहरु) को विकास।
सामान्यतया स्वीकार स्तर
मा मानिसहरू, 102 भन्दा बढी सेमी, महिला मा 88 भन्दा बढी सेमी मंडल कमर - सम्भव स्वास्थ्य जोखिम बारे चेतावनी (हृदय रोग, प्रकार द्वितीय मधुमेह)। , 94 सेमी सम्म महिलाहरु को लागि - - यसलाई मानिसहरू लागि आदर्श रूपमा छलफल गर्न सकिँदैन 80 सेमी सम्म।
हामी सौंदर्य घटक कुरा भने, विश्व महिला सबैभन्दा देशहरूमा आकर्षक मानिन्छ, जसको कमर 70 सेमी भन्दा कम मंडल। शोधकर्ताओं को कमर मा हरेक अतिरिक्त5सेमी पुरुष र 13% महिला 17% द्वारा अकाल मृत्यु को संभावना वृद्धि फेला परेन।
हामी कमर मात्र मापन
आफ्नो कमर नाप्ने गरेर, जांघों पनि संकल्प मापन गर्न सक्नुहुन्छ। नितम्ब समान सिद्धान्त कमर माप मा टेप नाप्ने मापन (हुन स्तर, छैन "तान्नुहोस् बाहिर" मीटर), तर चाक को फराकिलोकालागि भाग मा। व्यक्ति को स्वास्थ्य न्याय र कुन हदसम्म आफ्नो अपील बताइएको व्यवसायीक मद्दत गर्छ जो पश्चिम मा एक लोकप्रिय आंकडा, - कूल्हों को मात्रा गर्न कमर आकार मिल्ने। त्यसैले जोडाहरू अध्ययन अवस्थामा को 22-61% मा यो सम्बन्ध शक्ति र जीवनको बाटो द्वारा त्यसपछि मात्र आनुवंशिक कारक निर्भर र देखाएका छन्।
कमर र नितम्ब प्रजनन को एक सूचक रूपमा
पातलो कमर संग एक महिला राम्रो स्वास्थ्य आनन्द, तिनीहरूले बाँझोपन र मूत्र-लैंगिक सिस्टम को रोगहरु बाट पीडित कम संभावना छ। कमर-को हिप अनुपात, गर्भ धारण र एक बच्चा जन्म दिन सक्ने क्षमता संग सम्बन्धित छ। बारेमा 0.9 को सूचकांक संग मानिसहरू एक बच्चा गर्भ धारण गर्न सबै भन्दा राम्रो मौका, र 0.8 वा उच्च एक उपाय संग एक महिला स्वाभाविक गर्भवती रही एक धेरै राम्रो मौका छ। अनुसन्धान कमर र नितम्ब एक कम दरमा नै वजन संग बालिका थप precocious यौवन अवस्था छ कि सुझाव। यो वृद्धि हर्मोन मा प्रकट भएको छ।
1993 मा मा कृत्रिम मल समयमा डच अध्ययन गर्भवती प्राप्त संभावना कम कमर-को हिप आवाजमा महिलाहरु उच्च छ भन्ने देखाए। यो एक चक्र मा अवधारणा को likelihood को 0.1 एकाइ को वृद्धि दर 30% द्वारा कम छ उल्लेख गरेको छ (डाटा उमेर, तौल लागि समायोजन पछि प्राप्त, र पनि कृत्रिम गर्भाधान गराउँछ)। पुष्टि सौन्दर्य को canons युरोपेली महिला फरक छन् जहाँ अफ्रिकी देशहरूमा, मा एक एकदम पूरा नितम्ब (जस्तै 135 सेमी) छ भन्ने तथ्यलाई छ, तर कमर तिनीहरूले स्पष्ट व्यक्त र noticeably साघुँरो नितम्ब (जस्तै 100 सेमी)। राम्रो बच्चाहरु को जन्म लागि सूचक - तपाईं 135 द्वारा 100 विभाजन भने, तपाईंले एक 0.74 प्राप्त।
सबै अवसरका लागि कालो जूता चयन
प्रकार, निर्माता र प्रतिक्रिया: कसरी चलिरहेको जूता चयन गर्न। कसरी चलिरहेको जूता सही छनौट गर्न। प्रविधि चलिरहेको जूता
पुरुष वस्त्र शैलीहरू: खेलकुद, व्यापार, क्लासिक, सैन्य र आकस्मिक अन्य। पुरुष वस्त्र को के शैली लागि सही छ?
Guacamole - यो के हो? कसरी guacamole तयार?
बैंकहरू को विश्वसनीयता दर्जा: के परिवर्तन भएको छ?
आकर्षक र सूचनात्मक संग्रहालय फोन
जसको लागि उहाँले लैरी संग सजाय थियो? विशेषताहरु लैरी एम गोर्की कथा "पुरानो Isergil"
चिकित्सा 'Fiziotenz'। निर्देशन
आदर वास्तविक प्रतिभा
हराएको कार कुञ्जीहरू, के र कल गर्न कसले के? पाँच सुझावहरू
किन अक्षम माउस छ